သင်၏စီးပွားရေးကိုစီမံရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း Nomo | Androidsis
သင်၏စီးပွားရေးကိုစီမံရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း Nomo ဖြစ်သည်
DaniPlay | | Android application များ
စာရင်းကိုင်အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း၏စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာရန်နှင့်တိုင်းတာရန်။ များစွာသောသူတို့သည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အခြေခံကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်နည်းပညာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊
မည်သည့်စီးပွားရေးအမျိုးအစားကိုမဆိုဤစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် Nomo ကိုရရှိနိုင်သည်multi-platform application (၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ iOS နှင့် Android) တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခွန်များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
5 Nomo ရှိသင်၏ဘဏ်များကိုစစ်ဆေးပါ
6 App တွင်အာမခံ၊ ငွေစုနှင့်အခြားအရာများ
8 Nomo Download
အရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုမှာစာရွက်စာတမ်းများတည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်လုံးဝဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်လိမ့်မည် (အကယ်၍ သင်လိုအပ်လျှင်စာရွက်စာတမ်းများကို print ထုတ်နိုင်သည်) ။ စက္ကူအပြင် Nomo နှင့်အတူသင်စီမံခန့်ခွဲသောအခါအချိန်သက်သာလိမ့်မည် အခြားပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုစရာမလိုဘဲတစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းတွင်ရှိသည်။ Nomo ဖြင့်သင်သည်ဓာတ်ပုံတစ်ခုတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုဆွဲယူခြင်းဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုလက်ဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိပဲအလိုအလျောက်စာရင်းရှင်းလိမ့်မည်။ ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့အတူသူတို့ဟာသင့်ရဲ့စာရင်းကိုင်စာအုပ်တွေကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။
မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းသည်လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုသည့်အခါသင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုထပ်ဆောင်းနှုန်းထားနှင့်လိုချင်သလောက်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိုအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာ Nomo သည်သင်ဘဏ်များကိုစည်းလုံးညီညွတ်စေရန်နှင့်စာရင်းအင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့်သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်ထိန်းချုပ်မှုရှိစေရန်သင်၏ဘဏ်အား၎င်း၏ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ အချက်အလက်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ငွေတောင်းခံလွှာများဖန်တီးခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းကို Nomo ကခွင့်ပြုသည် ဖောက်သည်နှင့်သက်ဆိုင်သော, အီးမေးလ်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် Nomo ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲပေးပို့ပါ။ လက်ခံနိုင်သော universal formats များအနက်တစ်ခုမှာ PDF ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် app မှ application နှင့်အလွယ်တကူထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Nomo tool သည်ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်များကိုတွက်ချက်သည် (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များအပေါ်အဓိကမူတည်သည်) နှင့်အချိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီတွင်နုတ်ယူမည့် VAT ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သင်မြင်နိုင်သောအခွန်အားလုံးကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်အက်ပ်တွင်စစ်ဆေးပါ။
လေးပုံတပုံစီအခွန်အခများတင်သည့်အခါမန်နေဂျာတစ် ဦး နှင့်အတူလိုက်ပါခြင်းသည်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်ဖြေ - ဒီငွေပမာဏနဲ့သင်ပေးရမည့်ငွေပမာဏအသေးစိတ်ကိုသင်သိပြီးမည်သည့်မေးခွန်းများမဆိုသင်လုပ်ရမယ်။ Nomo သည်သင်အားနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် - chat၊ email၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းမှအရာအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲသောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်သို့မဟုတ်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည် Nomo ၏ကြီးမားသောအားသာချက်မှာယခင်စီမံခန့်ခွဲမှုမှ၎င်း၏ကိရိယာသို့အရာအားလုံးကိုအနည်းငယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးထားသည်။ ကုန်ကျစရိတ်။
နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာသင်သည်သင်၏ဘဏ်များကို၎င်း၏ပလက်ဖောင်းတွင်ပေါင်းစည်းနိုင်လိမ့်မည်၊ သို့မှသာသင်၏အကောင့်များနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်မှုမရှိသောအပလီကေးရှင်းများစွာဖွင့်ထားခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
သင်မည်သည့်ဘဏ်ကိုမဆိုသင်လိုအပ်သမျှဘဏ်များကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်ချိတ်ဆက်သောအခါသင့်အကောင့်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင်အရောင်းသို့မဟုတ်အသုံးစရိတ်ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်ငွေတောင်းခံလွှာအားလုံးကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်စုဆောင်းထားခြင်းရှိမရှိကိုခြေရာခံနိုင်လိမ့်မည်။
App တွင်အာမခံ၊ ငွေစုနှင့်အခြားအရာများ
ဒီအပလီကေးရှင်းကအပိုရွေးချယ်စရာများစွာပေးထားသည်ထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးအာမခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း, အခြားသူများအကြားငွေစုအကောင့်အဖြစ်။ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အခွန်များနှင့်အခွန်အခများကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်ခြင်းတွင်ကိရိယာကိုမထွက်ဘဲအလိုအလျောက်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်ကိရိယာမှတစ်ဆင့်အရာရာတိုင်းကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု! အချို့သောအလွတ်များနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည့်အရာတစ်ခုမှာ ၀ င်ငွေခွန်ပြန်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။။ သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက Nomo ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမှားမလုပ်မိစေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အဆိုပါကြေညာချက်အရေးကြီးပါသည်သင့်အနေဖြင့်ဘဏ္fromာရေးဌာနမှပြန်အမ်းငွေဖြစ်စေ၊
Nomo မှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ရင်းနှီးဖို့ ၁၅ ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ သင်ကြည့်ရှုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Nomo သည်သင်ဆုံးဖြတ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်လစဉ်ကြေးသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ငွေပေးချေမှုဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ယူရို ၇.၉ မှစံသတ်မှတ်ထားသောငွေစာရင်း (ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခွန်များ) အားလုံးပါ ၀ င်သော Standard အစီအစဉ်နှင့် Standard ကိုစီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ဆောင်မှုယူရို ၃၁.၉ မှပါဝင်သည်။
Nomo အတွက်ရရှိနိုင်သည် အန်းဒရွိုက်eiOS ကိုနှင့်လည်း၌တည်၏ ကို web version ကို. လျှောက်လွှာနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲမှုက၎င်း၏ရိုးရှင်းသော interface ကိုကြောင့်လွယ်ကူသည်စင်မြင့်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါသင်၌မေးခွန်းများရှိသောပညာရှင်များရှိခြင်းအပြင်။
Nomo- ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု
ရေးသားသူ: Sabadell တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆဲလ် SL
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏စီးပွားရေးကိုစီမံရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း Nomo ဖြစ်သည်
Android အတွက် Pinturillo ဂိမ်း ၉ ခု
Android အတွက်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းဂိမ်း ၁၄ ခု